Ciidamada Kenya oo qarax lagula eegtay magaalada Mandheera.
May 21, 2012 - Written by Mandheera:-Wararka ka imaanaya magaalada Mandheera ayaa sheegaya in qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan Booliska dalka Kenya kuwaas oo marayey xaafadda Buulo-jineefa ee magaalada Mandheera warar hordhac ah ayaa sheegaya in saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin Boolis ay ku dhaawacmeen halka qofka kale oo rayid ah uu ku dhaawcmay.
Qaraxa lagu weeraray ciidamada Kenya ayaa waxaa loo adeegsaday Miino dhulka lagu aasay taas oo burbur gaarsiisay gaari ay wateen ciidamada Booliska ee dalka Kenya.
Qaraxa ka dib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo tiro badan kuwaas oo baaritaano ka bilaabay dhamaan guryaha ku dhow halka uu qaraxa ka dhacay waxayna bilaabeen in qabqabtaan dad tiro badan iyaga oo geeyey saldhiga Booliska ee Degmada Mandheera.
Saraakiisha ciidanka dalka Kenya ayaa inta badan waxay eeda qaraxyada ka dhaca dalkooda dusha uga tuuraan Ururka Al-Shabaab ,Ka dib markii ay hanjabaadyo badan ay soo jeedsheen madaxada ururka Al-Shabaab iyaga wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan duulaanka qaawan ay ciidamada Kenya ku soo qaadeen gobalada J/hoose iyo Gedo.